သင့်အသားအရေမှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ - Hello Sayarwon
သင့်အသားအရေမှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့အခါ ဘာတွေဖြစ်လာမှာလဲ
ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Kaung Thar | ရေးသားသူ Dr. Thiha Phyo Myint
သင့်အရေပြားအကြောင်း ဘာတွေသိထားသလဲ။ သင့်အရေပြားမှာ ရေဓါတ်လုံလုံလောက်လောက် ရှိနေရဲ့လား။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ရင် ဘာလုပ်ရမလဲ။
ဒီဆောင်းပါးလေးဟာ အဆိုပါ မေးခွန်းတွေကို အတိုင်းအတာတခုထိ ဖြေပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
အသားအရေမှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းဟာ ထူးခြားပြီး ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထမရှိတဲ့ အရေပြားဆိုင်ရာ အခြေအနေတခုဖြစ်ပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် အဓိက ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါတယ်။
ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင် သင့်အရေပြားဟာ ရေဓါတ်မရှိတော့ဘဲ အဆီတွေကိုတော့ ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အသားအရေဟာ အဆီပြန်တဲ့နေရာကပြန်၊ခြောက်တဲ့ နေရာက ခြောက်နဲ့ ဖြစ်နေပါလိမ့်မယ် (နဖူး၊နှာခေါင်း၊မေးစေ့ စတဲ့ နေရာတွေမှာ အဆီတွေများပြားပြီး ပါးနေရာတွေမှာတော့ ခြောက်သွေ့နေပါလိမ့်မယ်)။ ဒီလို အသားအရေမျိုးဟာ ဆောင်းတွင်းမှာ ဖြစ်ပေါ်လာလေ့ရှိပါတယ်။
ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ အသားအရေဟာ ပျက်စီးလွယ်တာကြောင့် အရေးအကြောင်းတွေလည်း အလွယ်တကူ ပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပါတယ်။ သင့်အနေနဲ့ မှန်ဘီလူးကို သုံးပြီး အနီးကပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်နေတဲ့ အရေပြားနေရာမှာ တြိဂံပုံစံအရေးကြောင်းအသေးလေးတွေကို တွေ့မြင်ရလေ့ရှိပါတယ်။
အရေပြား ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တာဟာ အဆီပြန်တတ်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်တွေနဲ့ ဝက်ခြံပေါက်လေ့ရှိသူတွေမှာ အင်မတန် အဖြစ်များပါတယ်။
အသားအရေမှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းကို ဘယ်လိုကုသမလဲ။
မှန်ကန်သင့်တော်တဲ့ ကုသမှုနည်းလမ်းကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့အတွက် အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ ခြောက်သွေ့တဲ့ အသားအရေနဲ့ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ အသားအရေကို တိတိကျကျ ခွဲခြားသိဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက် အဆီဓါတ်ပါဝင်တဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကို သုံးစွဲဖို့မလိုဘဲ ရေဓါတ်ကိုသာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
ဒါမှသာ အရေပြားမှာရှိတဲ့ အဆီဓါတ် နဲ့ ရေဓါတ်မျှတသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ အသားအရေပိုင်ရှင်အများအပြားဟာ တန်ဖိုးကြီး လိုးရှင်းတွေ၊ခရင်မ်တွေ လိမ်းသည့်တိုင် အသားအရေဟာ မူလအတိုင်းပြန်ကောင်းမလာဘဲ ပိုခြောက်၊ပိုပါးလာတာကိုသာ တွေ့ကြရပါတယ်။
ဒါကြောင့် ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်နေတဲ့ အသားအရေကို ပြန်လည်ကောင်းမွန်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အချက်လေးတွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
၁။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ အသားအရေအတွက် Hyaluronic Glycerin Acid, Sodium PCA, Sorbitol, Allantoin, နဲ့ Propylene Glycol တို့ပါဝင်တဲ့ အစိုဓါတ်ထိန်းပစ္စည်းတွေ (moisturizer)ကို အသုံးပြုဖို့ လိုအပ်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ ပတ်ဝန်းကျင်က ရေဓါတ်တွေကို အရေပြားထဲ စုပ်ယူစိမ့်ဝင်စေတဲ့အတွက် အသားအရေကို နူးညံ့စေပါတယ်။
၂။ T area လို့ခေါ်တဲ့ နဖူး၊နှာခေါင်းနဲ့ မေးစေ့နေရာတွေအတွက် သင့်တော်မယ့် မျက်နှာလိမ်းရည် serum ကို ရွေးချယ်သုံးစွဲပါ။ အသားအရေ အေးမြလန်းဆန်းနေတဲ့ နွေရာသီမှာ serum ကို မသုံးစွဲလည်း ရပေမယ့် ဆောင်းတွင်းမှာတော့ အဆိုပါ နေရာတွေမှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်မှု ဆိုးဆိုးရွားရွား ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တာမို့ ရေဓါတ်ကိုအခြေခံထားပြီး အဆီလုံးဝမပါရှိတဲ့ serum ကို (moisturizer မလိမ်းခင်မှာ) လိမ်းပေးရပါမယ်။
၃။ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်နေပြီး အဆီဓါတ်တော့ ရှိနေသေးတဲ့ အသားအရေအတွက် moisturizer နှစ်မျိုး အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ တမျိုးက အဆီမပါသလောက်ဖြစ်တဲ့ ညလိမ်းmoisturizer ဖြစ်ပြီး T zone(နဖူး၊နှာခေါင်း၊မေးစေ့)ကို လိမ်းပေးရမှာဖြစ်ကာ နောက်တမျိုးကတော့ မျက်နှာပေါ်က ခြောက်ကပ်နေတဲ့ အရေပြားနေရာတွေ (ပါးပြင်ပေါ်)ကို လိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၄။T zone(နဖူး၊နှာခေါင်း၊မေးစေ့) ကို အဆီဓါတ်ဖယ်ရှားစုပ်ယူပေးတဲ့ တစ်ရှူးစလေးတွေနဲ့ အသာအယာ ပွတ်ပေး၊တို့ပေးနိုင်ပါတယ်။
ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်နေတဲ့ သင့်ရဲ့အသားအရေကို နေ့စဉ်ဘယ်လိုထိန်းသိမ်းမလဲ။
မျက်နှာဆေးကြောသန့်စင်ပြီးတဲ့အခါ စက္ကန့်၆၀ထက်ပိုပြီး မျက်နှာပြောင်နဲ့ ဘယ်တော့မှမနေဘဲ toner၊အယ်လ်ကိုဟော ဒါမှမဟုတ် serum အရည် စတာတွေကို အမြန်လိမ်းထားရပါမယ်။ မျက်နှာပြောင်နဲ့ တမိနစ်ထက်ပိုပြီးနေမိရင် သင့်မျက်နှာအသားအရေဟာ စတင်ပြီး ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်လာမှာဖြစ်ကာ သင့်အရေပြားပေါ်က အစိုဓါတ်ကို လေထုက စုပ်ယူဖယ်ရှားသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူအများအပြားဟာ scrubs ကြမ်းကြမ်းတွေကို သုံးပြီး ဂျီးချွတ်သန့်စင်တာမျိုးကို ပြုလုပ်လေ့ရှိကြပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဒီလိုလုပ်တာဟာ မျက်နှာလေးတင်းရင်းသွားတဲ့ ခံစားချက်ကိုရရှိပြီး တကယ်ကို သန့်စင်ပြောင်လက်သွားတယ်လို့ ယူဆကြလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ မှားယွင်းတဲ့ အယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ ပြင်းထန်စွာ ပွတ်တိုက်ဂျီးချွတ်ခြင်းဟာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တာနဲ့ အရေပြားနီရဲရောင်ရမ်းတာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်တဲ့အတွက် scrubs အကြမ်းစားတွေကို သုံးမယ့်အစား detergent အပျော့စားကိုပဲ သုံးစွဲပါ။ တကယ်လို့ သင်ဟာ clarisonic cleanser လို့ခေါ်တဲ့ မျက်နှာသန့်စင်စက်လေးကို ဂျီးချွတ်ခြင်းနဲ့ ပေါင်းစပ်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် စက်ကို နှစ်ရက်တခါလောက် အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပြီး ဂျီးချွတ်တာကိုတော့ နှစ်ပတ်မှ တခါ ပြုလုပ်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
Laureth Sulfate Sodium ဒါမှမဟုတ် Ammonium Sulfate Laureth တို့ပါဝင်တဲ့ အသားအရေထိန်းသိမ်းမှုပစ္စည်းတွေကို လုံးဝရှောင်ကျဉ်ပါ။ အဆိုပါ ပါဝင်ပစ္စည်းတွေဟာ တနေ့တာအတွက် အရေပြားဆဲလ်အသစ်ဖြစ်ပေါ်မှုကို တားဆီးနိုင်တာကြောင့် ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်နေတဲ့ သင့်အသားအရေအတွက် သတင်းဆိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အသားအရေမှာ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်ခြင်းဟာ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားအောင် ပြုပြင်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတမျိုး ဖြစ်ပြီး ဒီဆောင်းပါးလေးကနေ သင့်အရေပြားနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သိသင့်တဲ့ အချက်အလက်တချို့ကို သိရှိသွားမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။
ဒါမှသာ သင့်အနေနဲ့ အဆိုပါ ရေဓါတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ အခြေအနေကို ကုသနိုင်၊ကာကွယ်နိုင်မှာပဲ ဖြစ်ပါတော့တယ်။
Dehydrated Skin: The skin’s natural barrier – Riversol
https://www.riversol.com/pages/dehydrated-skin Accessed on April 5, 2017
https://www.healthyskinsolutions.com/dehydrated-skin/ Accessed on April 5, 2017
The power of water FOR TRULY BEAUTIFUL, HYDRATED SKIN
http://www.simple.co.uk/you-and- your-skin/dehydrated- skin.html Accessed on April 5, 2017
လေဆာကုသမှုတွေနဲ့ အရေပြားကို ဘယ်လိုနုပျိုအောင် လုပ်မလဲ
အသားအရေ ညီညာလှပအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ
အမျိုးသား တွေရဲ့ မျက်နှာအဆီပြန်ခြင်း ပြဿနာ ဒီလိုဖြေရှင်းပါ
အမျိုးသား အမျိုးသားအသားအရေ အလှအပ အဆီပြန်ခြင်း မျက်နှာအသားအရေ အမျိုးသားကျန်းမာရေး အရေပြား ချွေးပေါက်ကျယ်ခြင်း အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်း
အမျိုးသားကျန်းမာရေး, အမျိုးသားကျန်းမာရေးဆိုင်ရာများ မေ 10, 2020 .2mins read
ခရီး ခရီးသွား အလှအပ အသားအရေ မျက်နှာအသားအရေ အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်း skin care နေရောင်ခြည် မျက်နှာပေါင်းတင် Sunscreen မိတ်ကပ်
အသားအရေနှင့် အလှအပ, အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း ဖေ‌ဖော်ဝါရီ 21, 2020 .2mins read
ချွေးပေါက်ကျယ်နေရတဲ့ အကြောင်းရင်းကို အဖြေရှာကြမယ်
ချွေးပေါက် မျက်နှာ အသားအရေ အရေပြား ချွေးပေါက်ကျယ် အစိုဓာတ် နေလောင်ဒဏ် မျိုးရိုးလိုက်ခြင်း အဆီပြန်ခြင်း အလှအပ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း
အသားအရေနှင့် အလှအပ, အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း ဇန်နဝါရီ 13, 2020 .2mins read
မျက်နှာပေါင်းတင်ဖို့ Sheet Mask သုံးမယ်ဆိုရင် ဒါတွေသိထားပေးပါ
အလှအပ အသားအရေ အရေပြား မျက်နှာ အသားအရေထိန်းသိမ်းခြင်း skin care mask နုပျိုလှပ အရွယ်တင် နေရောင်ခြည် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း အစိုဓာတ်
အသားအရေနှင့် အလှအပ, အသားအရေ ထိန်းသိမ်းခြင်း ဒီဇင်ဘာ 19, 2019 .3mins read
၃၀ တောင် မကျော်သေးဘဲ ရုပ်ရင့်နေသူတွေ ဖတ်ဖို့
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇူလိုင် 29, 2020 .2mins read
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇွန် 12, 2020 .2mins read
ပျားရည် mask နဲ့ ဝက်ခြံ ကုကြမယ်
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် ဇွန် 8, 2020 .2mins read
လည်ပင်း အသားအရေ အရောင်မညစ်စေဖို့ နည်းလမ်းကောင်း (၈) ခု
ရေးသား ထုတ်ဝေခဲ့သည် မေ 11, 2020 . 1 min read